Yaa Rabbii Na garhaarii akkan Bakkaan gehuu, Yaadaf Hawwii Abbaa kiyyaa – Site Title
Yaa Rabbii Na garhaarii akkan Bakkaan gehuu, Yaadaf Hawwii Abbaa kiyyaa
Abbaan kiyya gaafan ani jollee, yeroon ani isaan bira ta’uu, Yaada isaan keessa guutee ofuma isaanitifi ofittii hasahu, Sagalees of fuudhanii haasahu yeroo bayyee dhageffadhee, ” Akkana ofiin jedha, Abbaan kiyya kunii gan jireenya baadiyya kana keessa jiraatuti Hawwiin isaa akkanatti dhertuudha miti jedhen, Abshiir Abbaa koo Hawwii kankee kana yoo isin mijachuu baatee Inshaa Allah Yoonif Rabbin na gargaaree anatuu galmaan isinif gehee, Akkan galman isinif gehu Du’aa’ii naggodhaa jedhen itti himadhee.
Anis yoonifin dadhabee Ijoolleen tiyyaa yaada kiyya akka galmaan geessuu abdiin qabaa Yaadanii Abdii Amin fi Naafyaad Abdii Amin
KAAYYOO FI Kiyyoo:
Namni KAAYYOO qabu Kiyyoo fedhees keeysuuf keeysaan baheetuma KAAYYOO isaa bira gaha. Gaafa inni kiyyoo keeyseef keeysaan bahee Kaayyoo isaa bira gahe Abbaan kiyyoo kaaye Kaayyoo waan hin qabneef Kiyyotti gala.
Kaayyoo bira gahuun akkaan waan jabaattuuf kiyyoo keeysa si galchu malti. Kiyyoon takka takka tan gubbaan isii kiyyoo tan keeysi isii kaayyootu jira.
Gaafa akkanaa kana KAAYYOO bira gahuuf kiyyoo seenuun dirqama taha. Kiyyoo dheeysuun ammoo KAAYYOO kaateef irraa si fageeysa, siifii KAAYYOO tee wal habaabsa. Kanaaf kiyyoo akkanaa tana seene jettee hin rifatin, hin dhiphatin, hin rakkatin, hin waywaatin. Kiyyoo akkanaa seenuun KAAYYOTTI SI GEEYSA waan taheef. Karaa KAAYYOO kee biraan si gahu kana seenuuf gammadi malee hin gaddin.
Ati ka kiyyoo namaaf kaayees nama kiyyoo keeysa seene laaltee KAAYYOO isaa hanqise jettee hin gammadin. Kiyyoon ati keeyseef Karaa KAAYYOTTI ISA GEEYSU malee Karaa kaayyoo isaa isa hanqisuu miti.
Kanaaf hedduu rifatanii waywaachuunii fi Gammadanii utaaluuniis hedduu gaarii miti. Dubbiin karaa fi akka yaadanitti osoo hin tahin karaa fi akka Rabbiin Karoorsetti taati.
Rabbiin laaftumatti kiyyoo keeysaan KAAYYOO biraan nu haa gahu.爐
Sammuun Irreen Oli!